လမ်းသွားတတ်ကာစအရွယ် ကလေးငယ်များအတွက် စိတ်မချရသော အစားအသောက်များ - Hello Sayarwon
Dr. K Zin Thwe မှ ရေးသားသည်။ 14/10/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
သင့်ကလေးသည် ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ သူစားသော အစားအစာများသည်လည်း ပိုမိုများပြားလာပါသည်။ သို့သော ်အချို့သောအစားအစာများသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက် သင့်ကလေးစားသော အစားအစာများကို ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။ အောက်ပါတို့သည် သင့်ကလေးကို ထိခိုက်စေသော အချို့သော အစားအစာများဖြစ်ပါသည်။
ကလေးများသည် သဘာဝအားဖြင့် အချိုကြိုက်တတ်ကြသည်။ သကြားလုံးများ၊ ဂျယ်လီများ၊ ဘီစကစ်နှင့် ကိတ်မုန့်များသည် ကလေးများအကြိုက်ဖြစ်ပြီး ထိုအစားအစာများကို စားခြင်းဖြင့် အခြားသော ကျန်းမာစေသည့် အစားအစာများကို နေရာမပေးချင်ဘဲဖြစ်တတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုအချိုများသော အစားအစာများကို ကလေးအသက်၂ နှစ်အရွယ်လောက်ထိ တတ်နိုင်သမျှ လျှော့စားစေခြင်းဖြင့် သွားပိုးစားခြင်းနှင့် သွားများပျက်စီးခြင်းကို ကယကွယ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
အခြေခံအားဖြင့် အသီးဖျော်ရည်များသည် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းမွန်သော်လည်း ပန်းသီးဖျော်ရည်သည် သကြားဓါတ်အများအပြားပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။
မိဘများသည် ပန်းသီးဖျော်ရည်က လိမ္မော်ရည် ၊ မက်မွန်ရည်နှင့် စပျစ်ဖျော်ရည်များထက် ပိုပြီး ကျန်းမာစေမည်ဟု မှားယွင်းယူဆနေကြသည်။ ၁၀၀ % ပန်းသီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဖျော်ရည်သည် ၁၆၀ ကယ်လိုရီခန့်ပါဝင်ပြီး သကြားဓါတ်အပြည့်အဝပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ပန်းသီးဖျော်ရည်သောက်ခြင်းသည် ပန်းသီးစားခြင်းထက် အမျှင်ဓါတ်များကို ချို့တဲ့စေကြောင်းတွေ့ရသည်။
အသင့်စားခေါက်ဆွဲများတွင် ပါဝင်သော ဓါတုပစ္စည်းများသည် ကလေးငယ်များ၏ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေသည့်အပြင် အာဟာရတန်ဖိုးနည်းခြင်း၊ ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓါတ်များမပါဝင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည့်အတွက် သင့်ကလေးကို မကျွေးသင့်ပါ။
ကလေးများတွင် ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်းများကို လျော့ကျစေရန် ဥများနှင့် ဥများဖြင့် လုပ်သော အစားအစာများ(ဥပမာ- ကိတ်မုန့်)စသည်တို့ကို ကလေးအသက် ၆လ မပြည့်မီတွင် မကျွေးသင့်ပါ။ ကလေးအသက် ၆ လပြည့်ပြီးမှသာ နေ့စဉ်စားသော အစားအစာများထဲတွင် ကျက်အောင်ပြုတ်ထားသော ဥများကို ထည့်ကျွေးသင့်သည်။ မကျက်တကျက်ပြုတ်ထားသော ဥများနှင့် အခွံမပါဘဲပြုတ်ထားသော ဥများသည် ကလေးငယ်များ အစာအဆိပ်သင့်စေနိုင်ပါသည်။
ကလေး အသက် ၁ နှစ်အောက်တွင် လတ်ဆတ်သော နွားနို့များကို မကျွေးသင့်ပါ။ ယင်းသည် မိခင်နို့နှင့် ဖော်စပ်ထားသော နို့မှုန့်များလောက် ကလေးများအတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်များ ပြည့်ဝစွာမပါဝင်ပေ။ ၆ လအထက်ကလေးများကို မလိုင်အပြည့်ပါဝင်သော နို့များတိုက်ကျွေးနိုင်ပါသည်။
အသက်၅ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် အစေ့အဆန်များကျွေးခြင်းသည် အစာသီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် မကျွေးသင့်ပါ။ အစားသီးခြင်းမဖြစ်လျှင်တောင် ယင်းအစေ့အဆန်များသည် အထူးသဖြင့် မိသားစုဝင်များတွင် ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်တတ်လျှင် ကလေးများတွင် ပိုဖြစ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးများစားမည့်အစာတွင် အစေ့အဆန်များကို ဂရုပြုပြီး ကျွေးသင့်သည်။
အချုပ်ဆိုရသော် သင်သည် သင့်ကလေးကို အစားအစာများမကျွေးမီ သင့်ကလေး၏ အစာခြေစနစ်သည် ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နေပြီလား သေချာစွာသိရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
Unsafe Foods for Toddlers. https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/toddler/nutrition/Pages/Unsafe-Foods-for-Toddlers.aspx. Accessed December 6, 2016.
Foods that can be unsafe for your child. http://www.babycenter.com/0_foods-that-can-be-unsafe-for-your-child_1491465.bc. Accessed December 6, 2016
11 foods you should never feed your kids. http://europe.newsweek.com/11-foods-you-should-never-feed-your-kids-335404?rm=eu. Accessed December 6, 2016.